Shiinaha oo loogu talagalay PTX5V2 PTX-5 Garage Doorka Bedelka Fog ee 433.92Mhz Soosaarayaasha & Alaabta - Jos
Loogu talagalay PTX5V2 PTX-5 Garage Door Bedelka Fog ee 433.92mhz.
PTX5V2 Liiska Wanaagsan
Ku-dubbarid fogaanta iyada oo la adeegsanayo matoorka/qaasaha
1. Matoorada garaashka qaarkood waxay leeyihiin dabool caag ah oo daboolaya badhamada, fadlan ka saar daboolkan.
2. Riix oo ku hay batoonka Codka Albaabka buluuga ah ee matoorka ama badhanka SW1 ama SW2 ee sabuuradda qaataha (ha sii dayn badhankan).
3. Riix badhanka cusub ee fogaanta kaas oo aad rabto inaad isticmaasho si aad u xakamayso albaabka laba ilbiriqsi.
4. Ku sii daa badhanka fogaanta cusub iyo laba ilbiriqsi. Riix isla badhanka fogaanta mar labaad muddo laba sekan ah.
5. Ka sii daayo koodhka albaabka ama badhanka SW matoorka/heliyaha.
6. Taabo badhanka fog ee cusub si aad u tijaabiso shaqada albaabka.
5.Deleting dhammaan meelaha fog fog ee matoorka
1. Matoorka ka dami godka korontada.
2. Riix oo hay koodhka albaabka ama badhanka SW1 ee matoorka.
3. Dib u shid korantada, adigoo weli haya badhanka Koodhka albaabka. Koodhka albaabka LED wuxuu iftiimin doonaa dhowr ilbiriqsi ka dib si uu u muujiyo in xusuusta la nadiifiyay.
4. Sii daa badhanka Koodhka albaabka oo tijaabi fogaantaada si aad u hubiso in la tirtiray oo aanu shaqayn albaabka.
6.Barnaamijka fogaanta cusub ee iridda iyada oo la adeegsanayo fogaanta asalka ah
1. Istaag meel 1-2 mitir u jirta looxa kantaroolka.
2. Riix badhanka ku yaala fogaantaada asalka ah si aad u furto/ u xidho albaabka.
3. Isla markiiba ka dib albaabku bilaabo inuu dhaqaaqo, geli biin dhexda daloolka codaynta ee fogaanta asalka ah ee ku yaal bartamaha afarta badhan. Iftiinka LED-ka ee fogaanta wuxuu iftiimin doonaa marka si guul leh loo riixo oo hubiyo in iftiinku iftiimay ugu yaraan 2 ilbiriqsi.
4. Ka saar biinka fog fog ee asalka ah.
5. Riix fogaanta cusub oo qabo badhanka cusub oo aad rabto inaad ka shaqeyso albaabka 2 ilbiriqsi.
6. Sii daa badhanka laba ilbiriqsi.
7. Ku riix isla batoonka mar labaad 2 ilbiriqsi.
8. Sug 10-15 sekan oo tijaabi fogaanta cusub
7.. Faahfaahinta Sawirada
Hot Tags: Loogu talagalay PTX5V2 PTX-5 Garage Doorka Bedelka Fog ee 433.92MHz, fogaanta albaabka Garaashka, Rimuutka albaabka Garaashka ee loogu talagalay Liftmaster, Meel fog ee Garaashka albaabka Chamberlain, Meel fog ee Garaashka albaabka Merlin, Gudbiye, Xakamaynta Raadiyaha, Rimuut albaabka dabaasha, fogaanta albaabka wareega, Shiinaha, Soosaarayaasha alaab-qeybiyeyaal